Festival Moudjangaya M’chimé : Lasan’ny ASCB sy ny BBCM ny amboara -
AccueilSongandinaFestival Moudjangaya M’chimé : Lasan’ny ASCB sy ny BBCM ny amboara
Festival Moudjangaya M’chimé : Lasan’ny ASCB sy ny BBCM ny amboara
14/05/2018 admintriatra Songandina 0
Nikatona ny ridaon’ny hetsika « Festival Moudjangaya M’chimé » nokarakarain’ny klioba ASCB Boeny niaraka tamin’ny ekipan’ny Fiadidiana ny Repoblika notarihin’ny mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena, Mbola Rajaonah, rehefa nizotra nandritra herinandro tao Mahajanga. Marihina fa hetsika ara-panatanjahantena nisy fifaninanana teo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy sy « vétérans » lahy sy vavy, sy taranja beach soccer lehilahy.
Feno hipoka ny Complexe Sportif de Mahajanga omaly nandritra ireo lalao famaranana teo amin’ny taranja basikety. Ho an’ny sokajy N1A, tafavoaka tompondakan’ ny ASCB Boeny rehefa nanilika ny Cosfa Analamanga tamin’ny isa mazava, 86 noho 77. Teo amin’ny « vétérans » lehilahy kosa indray, tsy nahatohitra ny BBCM Analamanga ny ekipan’i Boeny. Lasan’ity ekipa avy any Antananarivo ity ny amboara rehefa nandresy an’i Boeny tamin’ny isa mavesatra, 77 noho 43, izy ireo. Toraka izany koa ny teo amin’ny sokajy vehivavy, tompondaka ny JCBA rehefa nandavo an’i Boeny tamin’ny isa, 65 noho 45.
Ankoatra izay, notoloran’ny mpikarakara baolina basikety roa avy kosa ireo ekipa manana ny ho aviny nandray anjara tamin’iny hetsika iny.
Marihina etoana fa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina kosa no nanolotra ireo amboara notolorana ireo ekipa tompondaka sy tompondaka lefitra tamin’iny « Festival Moudjangaya M’chimé » andiany voalohany iny.
Tetsy andaniny, nofaranana tamin’ny lanonana fiaraha-niala hetaheta tao amin’ny Hotel Baobab Tree kosa ny hetsika izay nanasan’ny mpikarakara sy ny solontenan’ny Fitondram-panjakana ireo mpandray anjara. Teo amin’ny fandraisam-pitenenana, dia nanambara ny mpanolotsaina manokan’ny Filohan’ny Repoblika, Mbola Rajaonah, fa ilaina ny mifanohana sy mifanome tanana amin’ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fanatanjahantena. « Vonona hanohana ny tontolon’ny fanatanjahantena hatrany ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Mila mandray andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ihany koa ny rehetra », hoy i Mbola Rajaonah.